Tonga Ao Italia Ireo “Mpanohitra Andriambavy”-n’i Arzantina · Global Voices teny Malagasy
Tonga Ao Italia Ireo “Mpanohitra Andriambavy”-n'i Arzantina
Voadika ny 21 Janoary 2016 2:31 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, Italiano
Fonon'ilay boky natokana ho an'ny Mpanohitra-Andriambavy Frida Kahlo, miaraka amin'ny fahazoandalana ampitiavana avy amin'ny Rapsodia Edizioni
“Nahoana, rehefa mitantara ireo tantara amintsika, no resahina amintsika mandrakariva ireo vehivavy na lehilahy malaza? Manan-danja tahàka ireo andriambavy, mitafy raitra, izay tsy mahazo milalao na mandoto…. Na tahaka ireo tena-henjana, manana hery goavana izay tsy ho nanantsika velively… Amin'ny tranga misy anay, rehefa miteny izahay hoe “manan-danja”, dia miresaka ireo izay “naloto” mba hiala voly, mba hitombo, izay tsy niandry fotsiny hoe hisy zavatra hitranga, izay nampiasa ireo hery goavana, saingy kosa amin'ny endriny hafa! Toy ny ohatra hoe manatanteraka ireo tanjona tsy takatry ny saina, miatrika izao tontolo izao amin'ny fomba tena azy manokana, mandresy ireo sakana goavana ary manisy marika eo amin'ny vanim-potoana niainany.”
Efa niresaka ireo boky ho an'ny ankizy ireo ny Global Voices, ato anatin'ity lahatsoratra ity, ny volana oktobra lasa teo: boky voafantina misy sary, zara raha vao avy nivoaka avy any Arzantina saingy tsy mbola azo novinaniana ho tonga ao Italia indray andro any, ny tantaran'ireny vehivavy miavaka ao Amerika latina ireny. Saingy ankehitriny, azonay lazaina fa: tonga ao Italia ireo”mpanohitra-andriambavy”.
Azo atao izany rehetra izany noho ny asan'ny trano famoahamboky Italiana Rapsodia izay nampanao ny fandikana ireo fantin'i Martin Azcurra rehetra, nosoratan'i Nadia Fink, ary nohaingoin'i Pitu Saá sy navoakan'ny trano famoaham-boky arzantina Chirimbote. Toy ny ao Arzantina, ny boky voalohany navoaka tany Italia dia izay natokana mikasika ny fiainan'ilay meksikana vavy iray mpanao hosodoko, Frida Kahlo..
Tao anaty tafatafa, nilaza ny mpanoratra, Nadia Fink, hoe:
“Te hampiseho izahay fa eto amin'ity fanatontoloana ity sy amin'ny kolontsaina voazanaka tafahoatra, azo atao ny manorina ireo tantara tsara miaraka amin'ireo tena vehivavy. […] Nijaly, nifaly, nandeha nitady izay anjarany izy ireo, niasa niaraka tamin'ireo vehivavy sy lehilahy hafa izy ireo.”
Topi-maso, ny pejy voalohany amin'ny boky italiana natokana ho an'ny “mpanohitra-andriambavy” Frida Khalo, miaraka amin'ny fahazoan-dalana ampitiavana Rapsodia Edizioni
“Mampiasa fomba fiteny tsotra izahay, saingy kosa tsy tena tsotra be loatra. Avelanay tsy misy valiny ireo fanontaniana mba haniry hahalala bebe kokoa ry zareo (mpamaky).”
Tsy ny zavakanto izay nataony fotsiny no entin'ireo “mpanohitra-andriambavy” ireo fa koa ireo fihetsehampo sarobahàna sady mifangaro izay azo itarafana ny tantaram-piainan'izy ireo. Noho izany, ireo lohahevitra nofakafakaina dia tena samihafa be amin'ireo mahazatra antsika (ndlr: ao anaty literatiora-fahatanorana), eo amin'ny fahaketrahana mankamin'ny fanànana taovam-pananahana roa, saingy amin'ny fomba mnalefaka, ary tsy mianjera mihintsy amin'ny fijery ivelany.
Tsy mijanona amin'ny teny fotsiny ny fitetezana miaraka amin'ireo olona miavaka ireo. Mamporisika ireo tanora mpamaky mba hianatra amin'ny alalan'ny lalao ny boky, amin'ny alàlan'ireo sosokevitra aroso ao anatin'ireo pejy natonta amin'ny fiteny italiana mba hampifanatonana ireo firenena roa tena mifanalavitra ireo, ao anaty tontolo iray izay tena mahamafy ny ahiahy mikasika ny hafa.
09 Oktobra 2021Amerika Latina